Mmeghari mmepe maka ndi mbido
Mma Ihe omume maka ụmụ nwanyị
Mgbatị bụ ihe na-egosi kpọmkwem njupụta nke nkwonkwo ụkwụ. Ya mere, ihe ka njọ, ị ga-enwe ike ịmalite ntanye aka, nkwụsị ma ọ bụ dislocation. Ndị na-eme egwuregwu dị iche iche dị mkpa ka ha rụọ ọrụ iji zere mmerụ ahụ na ọnọdụ nke "mgbagwoju anya" nke na-eme mgbe ike gwụsịrị na enweghi oke mmegharị iji gbatịa ahụ.
Ya mere, mgbe ị na-amalite ịmalite ịmalite ịmalite, ị ga-ebido na-abanye na nkịta. Ejima maka ndị na - amalite - ọ na - egbu mgbu, na - adighi mma ma na - emerụ ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla etinyela nrụgide n'ahụ onwe gị ma ghara ime ka ọchịchọ twine. Nke mbụ, ị ghaghị ịmalite ụdị mmega ahụ nile maka ndị na-amalite, nke ga-eme ka akụkụ ahụ dum dịkwuo mfe, ma naanị mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ iji arụ ọrụ rụọ ọrụ na spar.
N'ezie, mmepe mmepe nke isi nwere ọtụtụ ụdị:
ntanye aka - ị gbasaa onye ọlụlụ, guzoro ọtọ n'ụkwụ ya ma ọ bụ ịpị n'azụ ya;
arụ ọrụ - ị gbatị onwe gị, ịgbatị ahụ ike na-arụ ọrụ na ha site n'ịdị arọ nke ahụ gị;
na - etinye aka na - agbatị - ị na - edebe ọnọdụ nke "esemokwu" na akwara nke 15 - 60 sekọnd;
Ịgba aka na Ballistic bụ jigide na mmiri iyi;
na-eme ihe nrịba nke siri ike - nkwụda ugwu, bụ nke a na-enwe nrụgide nta, mgbe nke ahụ gasịrị, ị na-eji nwayọọ site n'otu ọnọdụ ịkwaga ọzọ.
Maka onye mbido, nke ahụ dị oke egwu, nke ahụ na-egosi na ọ bụ naanị okwu. Okwesiri icheta na mmega ahụ kachasị mma maka ndị na-amalite ịcha bụ ihe dị egwu. Mgbe ị na-edozi ọnọdụ nke ahụ ma na-aga n'enweghị jerks gaa n'ọkwá ọzọ, ihe ize ndụ nke ihe gbapụrụ agbawa na agbatị na-emekarị ka ọ dị ala. Ma na ike ị chọrọ ichere. Ịgbatị eriri elu dị ezigbo mma. Ọ bụ ọrụ mgbatị ahụ, na-esi na longitudinal gaa na twine cross, na okwu, mee ya ma banye na ya!
Anyị ga-eme usoro ihe omume dị mfe, nke na-agụnye ihe dị iche iche na ihe dị ike.
Nwee aka ọtọ, ụkwụ n'ogologo, na inhalation anyị gbatị aka anyị elu, na nmechapu anyị na-eme nilt n'ihu. Anyị na-agba ọsọ n'ụkwụ anyị. Anyị na-agbatị aka anyị n'akụkụ, anyị na-aga n'ihu. Gbakwunye aka gị ma laghachi na rollback.
Anyị na-agbada aka n'ihu, anyị na-ehulata ụkwụ aka ekpe ma tinye aka, gbatịa azụ azụ, mmegharị mmiri.
Ụkwụ aka nri dị n'akụkụ aka ekpe, anyị na-agbatị aka anyị, anyị na-adọkpụ ihu n'egedege ụkwụ. Ladoshka tinye n'ala, aka ekpe aka azụ, bọtịnụ na-ehulata ma nọdụ na ya. Welie aka gị, dozie ọnọdụ ahụ. Anyị na-agbada n'azụ aka nri, ụkwụ aka nri na-akwaga n'etiti, anyị na-anwa ịkwaa ọkpụkpụ ahụ, na-atụgharị.
Anyị na-ebu ụkwụ aka ekpe, tinye ụkwụ n'apata ụkwụ aka nri, anyị na-agbanye aka anyị n'ụkwụ anyị, anyị dinara n'ihu.
Anyị na-agbago azụ.
Anyị na-eme ihe niile site na mmega ahụ 2 na ụkwụ aka nri.
A na-ekpuchi ụkwụ ụkwụ abụọ n'ihu anyị, na-akpụ rhombus, ụkwụ ọnụ. Anyị na-echegharị ụkwụ.
Ụkwụ na-agbasa ebe ọ bụla o kwere omume, na mkpọda nke ogwe aka anyị na-etinye ha n'okpuru ụkwụ anyị ma gbadaa n'ihu, ebe isi kwesịrị ịdata dị ka o kwere mee.
Anyị na-ahapụ ọnọdụ a n'ụzọ doro anya, anyị na-agbakọta ụkwụ anyị "na Turkish", were ume ma gbaa.
E nwere otu ihe na-eme ka ọtụtụ ndị na-amalite ịkụda aka ha. Iji nwee ike ime mgbanwe , ọ dị mkpa ka ị gbasaa kwa ụbọchị n'enweghi ọchịchọ. Nke bụ eziokwu bụ na icheta ụbụrụ maka "ịgbatị" a bụ na mgbe ọtụtụ ụbọchị nke nkwụsịtụ, ihe nile ga-amalite ọzọ site na ncha. Ya mere, egbula umengwụ iji mee kwa ụbọchị ọbụlagodi opekempe nke omume maka mgbanwe.
Ihe omume maka ụmụ ehi
Oke Cross - maka ole na ole ka ị ga-esi nọrọ n'obe-twine?
Kedu ka esi esi kpoo elu na ulo?
Kedu ka ị ga-esi welie aka gị ngwa ngwa?
Emega "Mgbapu" maka afọ
Kedu ka esi kpoo oke akwara n'olu?
Kedu ka ị ga-esi mee ihe n'ụzọ ziri ezi maka nsogbu?
Ntughari maka uzo
Arụ ọrụ ịgba ọtọ
Kedu otu esi eme afo afo?
Triceps - omume maka ụmụ nwanyị
Mmega ahụ maka "agụ iyi"
Mgbapụta elu elu - arụmọrụ nke arụmọrụ
Nymphaea - kụrụ ma lekọta
Akwa Victoria Victoria
Utu na-echere - uzommeputa
Nri ụtọ ejighị ya kpọrọ salted cucumbers na brine
Amy Schumer pụtara na mkpuchi nke American VOGUE
Ụkwara nta - ọgwụgwọ
Ezigbo hotels na Crimea na osimiri nkeonwe
Nri achịcha chiiz na-ebu ọka siliki - usoro kachasị mma nke eji megharịa ọnụ dị iche iche
Mkpụrụ mgbọrọgwụ na orchids - ihe ị ga-eme?
Brussels pulitere - Ezi ntụziaka
Na-adịghị edozi kwa ọnwa
Ulo elu na uwe akwa 2013
Ụmụ nwanyị Wallets - 24 foto nke mara mma na nkecha wallets maka ọ bụla uto
Mannick bụ ụzọ dị mfe
Àgwà ịkwa iko nke ndị nọ n'afọ iri na ụma
Ọ bụ Salma Hayek
Na ihe ị na-eyi leggings - 37 foto nke ihe ejiji ejiji n'oge niile